मेलम्ची र केपी ओली :- - Janapukar
प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क मेलम्ची र केपी ओली :- २०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्रि हुदा घोषणा भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको २५ बर्ष भयो । सरखारले आगामी दशैं अघि नै काठमान्डौ बासीलाई मेलम्चीको पानि खुवाउने भने पनि अझै एक बर्ष पछि मात्र यो आयोजना पुरा हुने देखिन्छ । त्यो बिचमा खिल राज रेग्मी र ज्ञानेन्द्र साह समेत जोड्दा मुलुकले १० वटा प्रधान मन्त्रि पाई सक्यो । एदी योजना अनुरुप काम भएको भए सात बर्ष भित्र काम भै सक्नु पर्ने थियो । त्यशैले मेलम्ची आयोजना पुरा गर्न नसक्नुको नैतिक जिम्मेबारी दशै जना प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ । बन्द हड्ताल, भस्टचार, कमिसन चक्र, फितलो व्यवस्थापन र कमजोर सासन प्रणाली आदि नै यो आयोजना ढिला हुनुको प्रमुख कारण हो । ९ योजना ढिला हुनाले १५ अरबमा बन्ने आयोजनाको लागत २५ अर्ब पुग्यो । सरखारले हरेक बर्ष एक अरबको दरले मात्र बजेट छुट्ट्याएको भए यो आयोजना बने पछि काठमान्डौ बासीलाई सित्तैमा पानि दिए पनि सकिन्थ्यो । सबै बजेट एकै चोटी दिनु पर्ने होइन, किनकि काम एकै बर्षमा सकिने पनि त होइन नी ११ अझ दाताले पनि सात आठ अरब त् दिएकै थिए क्यारे । यो योजना बने पछि भ्रस्टचार कमिसन चक्र र केयुकेयलको स्वार्थले गर्दा काठमान्डौ बासीको ढाड भाचिने गरि महसुल तिर्नु पर्ने छ । जनतालाई कस्तो सहुलियत दिने हो त्यो त सरखारको नीति र नियतमा भर पर्ने कुरा हो । २५ अरब र त्यसको ब्याज जोडेर हुन् आउने रकमलाइ आधार मानेर संचालन खर्च समेत जोडेर महँगो महसुल निर्धारण गरे पनि भयो । वा सरखारले २५ अरब नै व्यहोर्ने हो भने सित्तैमा दिए पनि सकिने भयो । करिब १० खरब जति बार्षिक बजेट आउने यो देशमा ३० लाख जति जन संख्या बस्ने उपत्यका बासीका लागि सरखारले चाहे एकै बर्षमा २५ अरब दिन पनि सजिलै सक्छ । तर केयूकेयल सायद महसुल उठाएको अनुसार प्रतिसतमा नाफा पाउने भएर होला जति महँगो सुल्क गर्यो त्यति फाइदा छ उसलाई । अत्यावश्यक सेवामा जनताका लागि सहुलियत नदिने हो भने १० खरबको बजेट ल्याउनुको के अर्थ रह्यो र ?
एदी एउतै आयोजना बन्न २५ बर्ष लाग्छ भने, केपी ओलीले घोषणा गरेका योजनाहरु कसरि तुरुन्तै बन्न सक्छन रु त्यशैले केपी ओलीले बोलेका कुराहरुलाई हावा गफ भनेर उडाउनुको कुनै अर्थ छैन । केपी ओलीको कुरा हावा भन्नेले नेपाली कांग्रेसको स्थानीय चुनाबको घोषणा पत्र हार्नु होला, त्यो भन्दा ठुलो हावा लाग्नेछ । कांग्रेसले बिगतमा कति बिकाश गर्यो र अब चाँही कति गर्ला भनेर सजिलै अड्कल गर्न सकिन्छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रि हुदा सुसिल सरखारले १०० दिन पुगेको उपलक्ष्यमा सरखारले सय दिनमा गरेको कामको विवरण जारि गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो, बजेट निकाशा गरिएको, तराइका असन्तुस्ट पक्ष संग, बार्ता गरेको, बजार अनुगमन गरेको, भस्टचार नगर्न चेताबनी गरिएको, नया नगरपालिका घोषणा गरिएको आदि आदि । त्यस्तो पनि उपलब्धि हुन्छ र रु अर्को एउटा घटना सुशील कोइराला प्रम हुदा भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदी नेपाल आएका थिए । त्यहि बखत सिन्धुपाल्चोकको जिरेमा ठुलो पहिरो गएर भोटेकोशी थुनियो । त्यसपछि सुशील कोइरालाले हत्त न पत्त चीन र भारतलाई मद्दतका लागि गुहारे । एउटा नेचुरल डिजास्टर फेस गर्न नसक्ने पाटीले पनि देश बनाउन सक्छ भनेर कसरि बिस्वाश गर्ने ? धन्न नेपाली सेनाले हामि खोल्न सक्छौ थुनिएको खोला भनेर इज्वत बचायो । ब्लास्टिंग गरेर नेपाली सेनाले केहि दिनमै नदि खोलेर देखायो पनि ।
केपी ओलीको काम नेपालको इतिहासमा मनमोहन सरखार पछि सबै भन्दा राम्रो मान्न सकिन्छ । नाकाबन्दी, तराइ आन्दोलन र भुकम्पले थला परेको बिसम परिस्थितिमा प्रम बने पनि उनले गर्न खोजेका कामको तारिफ नगरी बस्न सकिन्न । केपी ओलीले चीन तिर पारबहन सम्झौता गरि भारतको एकाधिकार तोड्ने काम गरे । राष्टिय स्वाभिमान जगाउने काम गरे । काठमान्डौ केरुङ्ग, पोखरा, लुम्बिनी रेल सर्बेको काम अगाडी बढाए, पेट्रोल लगाएत बिभिन्न खानि खोज्ने काम गरे । स्थानीय चुनाब मंगसिर मै गर्ने कार्य तालिका सार्बजनिक गरे । केपीले गरेको सबै काम बर्णन गर्ने हो भने अहिले सम्म बनेका सबै सरखारका काम फिका पर्छन । त्यशैले एदी कशैले केपीले बोलेका कुरा हावा भन्छ भने त्यो यथास्थिति बादी हो भनेर बुझ्नु पर्छ । संसारमा सम्पन्न देशहरुका कथा र इतिहाँस सुन्ने हो भने पनि धेरैलाइ हावा नै लाग्न सक्छ । देश र जनताको सपना र आकांक्षाहरु धेरै ठुला छन । जनताहरु परिबर्तन चाहन्छन, त्यशैले बिकासका कुरालाई हावा भन्ने यथास्थिति बादिलाई अबको चुनाबमा भोट हालिदैन । त्यशैले आफुलाई प्रजात्रन्त्रिक, क्रान्त्रिकारी र बिकाश बादी पार्टी भन्नेहरुले यी कुरा बिचार गरेर चुनाबमा आउनु होला । सधै जाल झेल गरेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नु होला । केपीले बोलेका कुरा हावा भन्नेहरुले त्यो भन्दा राम्रो गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । सधै बखेडा र बार्गेनिङ्ग गरेर सत्तामा टाँसिन खोज्नेहरुलाई जनताले राम्रै चिनेका छन् । अबको चुनाबमा ठुलो उथल पुथल हुने पक्का छ । चुनाब हारेका नेता समानुपातिक बाट संसदमा गएर फेरी पनि मुलुकलाई राजनीतिक बन्दि बनाउने खेल हुन् सक्छ, त्यस तर्फ हामि सबै चनाखो हुनु पर्दछ । युवाहरुमा राजनीतिक चेतना र देश प्रेम बढेको छ, त्यशैले आशा गरौ आगामी दिन नेपालको राजनीतिक र आर्थिक भबिश्य राम्रो हुनेछ ।